Ogaden News Agency (ONA) – Howl-wadeenka Jaaliyada Ogadenia ee Edmonton oo maanta kulan isugu yimid.
Howl-wadeenka Jaaliyada Ogadenia ee Edmonton oo maanta kulan isugu yimid.
Posted by Daljir	/ February 11, 2019
Maamulka jaaliyada Somalida Ogadenia ee gobalka Edmonton- Canada ayaa maanta shirkii caadiga ahaa isoogu yimid Xafiiska jaaliyada Ogadenia ,shirkan ooy ka soo qabgaleen inta badan xubnaha jaaliyada ayaa waxaa lagu dhageystay war bixino ay soo kala jeediyeen Maamulka jaaliyada,Xidhiidhiyaha Canada JWXO Halgame Abdi Raage iyo PHD.Mahamoud Ugaas.
War bixintan ayaa waxay ku qotontay Siyaasada geeska Africa iyo sidii shacabka Somalida Ogadenia ula jaan qaaday iyo qaabkii loo siiwadi lahaa.
Warbixin kadib waxaa halkaas su’aalo lagu waydiiyay masuuliyiinta shirka ka soo qaybgalay ku waasi oo ku saabsanaa howlgalada ka socda Ogadenia,waxayna masuuliyiintu uga jawaabeen si waafi ah ,sifiicanna ugu qanceen xubnihii shirka ka soo qayb galay.
ugu danbeyn shirkan oo saacado qaaday waxaa lagu soo gunaanaday sidii looga fa’iideysan lahaa siyaasada xawaaraha dheer ku socota ee ka taagan geeska africa guud ahaan gaar ahaan Ogadenia iyo Ethiopia.